Accueil Ny Mpitandrina Toriteny Toriteny 17-09-2017
Matio 18 :21-25 - Impiry no hanotan’ny rahalahiko amiko ka avelako izy?
Indray andro, tafaresaka taminà-olona iray ny Mpitandrina. Izao no tenin’ilay olona taminy “tsy mamela heloka na oviana na ovina aho no tsy manadino velively”. Somary nisalasala ihany ny mpitandrina. Tena fanambarana mafonja izany. Mila fahendrena ny famaliana azy. Hoy ilay mpitandrina taminy: “Manantena aho, Andriamatoa, fa tsy hanisy ratsy olona mihitsy ianao”.
Ndeha hiverenantsika ny textes! Atombontsika amin’ny fanontanian’I Petera izany: “Tompoko, impiry moa no hanotan’ny rahalahiko amiko, ka havelako izy?” Manome antsika ny tohin’ny fampianaran’I Jesosy momba ny hamahana ny fifandirana misy eo amin’ny mpirahalahy (gestion des conflits) ny fanontanian’I Petera.
Tokony hamela heloka isika, fa impiry? Ny Raby tamin’ny fotoan’androny dia nilaza fa tsy tokony hamela mihoatra ny in-3. Izany hoe tsy maintsy manisa ny famelan-keloka ataonao izany: 1…2…3 ary tapitra hatreo. Malala-tànana I Petera. Vonona izy hamela heloka in-7. Izany hoe nataony tonga avy roa heny ny an’ny raby ary avy eo nampiany iray mba hihoatra ny tokony ho izy. Fa ahoana hoy Jesosy? “Tsy lazaiko aminao hoe: hatramin’ny impito, fa hatramin’ny impito amby fito-polo”. Ilaina ny hananantsika fihetsika mamela heloka tsy tapaka amin’ireo izay manota amintsika. Ny tian’I Jesosy holazaina izany dia izao: “ry Petera, raha mbola manisa ianao, dia mbola tsy vonona ny hamela heloka”.
Taorian’izany valin-teny izany dia nitantara tantara Jesosy, fanoharana iray izay ahitana toetran’olona samy manana ny maha-izy azy. Ao ny Mpanjaka, ilay mpanompo ary ny naman’ilay mpanompo na mpiara-miasa aminy.
Ao amin’ilay fanoharana, ny Mpanjaka dia mampiseho an’Andriamanitra. Amin’izay hitantsika amin’ny asan’ny Mpanjaka dia ahafahantsika mianatra hoe manao ahoana ny fiasan’Andriamanitra amintsika. Ny mpanompo dia isika – ianareo sy izaho. Afaka mipetraka eo amin’ny toerany isika, angamba afaka mieritreritra ny tokony ho nataontsika. Azo an-tsaina amin’ilay fanoharana fa nanao toy izay nataon’ilay mpanompo isika; Ny naman’ilay mpanompo dia mampiseho ireo olona manodidina antsika.
Ny fanontanian’I Petera dia mikasika ny rahalahiny. Noho izany dia miresaka momba ny Fiangonana isika, dia ireo rahalahy sy anabavy ao amin’I Kristy. Mahaliana ny hiresahantsika momba ny Fiangonana sy ny fianakaviana. Efa tsapanao ve fa sarotra kokoa ny mamela heloka ny fianakaviana sy ny olona ao amin’ny Fiangonana noho ny ny an’ny tontolon’izao tontolo izao? Satria ireo izay akaiky antsika matetika no ireo afaka manafintohina antsika.
Andao hidirana ny tantara…Te-hidinika ny amin’ny volany amin’ireo mpanompony ny Mpanjaka. Manana trosa aminy ireto mpanompony ireto, ary mitaky ny hanefana izany ny Mpanjaka. Toy izany no fampiharana tsotra ny fanoharan’I Jesosy.
Ambaran’ny Baiboly fa manana trosa hefaina isika. Io trosa io dia antsoina hoe fahotàna, dia ny ratsy nataontsika tamin’ny hafa ary indrindra tamin’Andriamanitra. Toy ny Mpanjaka eo amin’ilay fanoharana, dia hanontany ny kaontiny amin’ny olona rehetra eto an-tany momba ny fahotany Andriamanitra. Fa amin’ny fotoana ho avy izany, amin’ny andro farany, rehefa hitsara izao tontolo izao Andriamanitra. Hisy vokany ho an’ireo tsy Kristiana sy mbola mibaby trosan’ny fahotana. Ny Romana 6:23 dia milaza amintsika fa fahafatesana no tambin’ny ota na vokatry ny ota. Ho an’ireo izay tsy mba mahalala an’Andriamanitra, ho an’ireo izay tsy Kristiana dia hisy ny ampamoaka. Na ankehitriny izao aza dia mihantona eo ambony lohan’ny tsy mpino io trosa io dia ny fahotana. Mitombo andro aman’alina arakaraky ny tsy andoavana azy izy.
Ananan’ilay Mpanjaka trosa talenta 10.000 ilay mpanompo. Ny talenta iray dia mitovy amin’ny karama azon’ny olona iray mandritra ny herintaona. Mandritra ny 27 taona no handoavana izany trosa izany raha tsy manao n’inona n’inona afa-tsy mandoa trosa, izany hoe: tsy mihinana, tsy mividy fitafiana, tsy mivelona amin’ny fiainana an-davanandro, dia mety ho vita ihany angamba. Hitantsika amin’izany ny halehiben’ilay trosa, ary ny tena marina dia tsy ho voaloa mihitsy. Ary izay no tian’I Jesosy ho azontsika. Afaka miezaka mandoa ny trosantsika isika. Afaka miteny toy ilay mpanompo isika hoe: “Tompoko, omeo andro aho fa haloako ny anao rehetra”. Ary hanandrana hanao izany isika.
Afaka manao ny tsara isika, afaka mikajy ny asantsika, maneho fahatsarana amin’ny zanatsika, sy ny toy izany… fa tsy afaka handoa io trosam-pahotana io isika. Be loatra ilay izy, makadiry loatra, ary mihoatra noho izay azontsika tantanina. Tahaka ilay mpanompo dia mila olon-kafa faka handoa ny trosa izay tsy voaloantsika isika.
Noho ny safidiny manokana dia namela ny trosan’ny mpanompony ny Mpanjaka. Azo sary an-tsaina fa teny fanamelohana no nantenain’ilay mpanompo ho re. Nanantena ny hamidy izy mba hanefana ny trosany, izay zavatra fanao tamin’izany fotoana izany, Kanefa raha izay no tokony ho izy dia nahazo fahafahana izy. Nofoanana ny trosany, nesorina, novonoina ary navela helony. Tsy manana trosa intsony izy.
Noho ny safidiny manokana, dia nanao toy izany tamintsika koa Andriamanitra mba ho voavela tanteraka ny trosam-pahotantsika. Nirahiny teto amin’izao tontolo izao ny Zanany mba ho faty, mba ahafahana mandoa ny trosan’ny fahotantsika, trosa izay voaloantsika. Niaina fiainana tonga lafatra i Jesoa ary nanaiky hanao sorona ny ainy Andriamanitra mba handoavana ny trosan'ny fahotana niangona vokatry fiainantsika tsy lavorary.
Nihatra tamin’I Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana ny ratsy rehetra nataontsika. Tonga ota noho ny amintsika Izy na dia tsy nanota akory aza. Notsarain’Andriamanitra Izy ary niaritra ny fahafatesana izay tokony ho niaretantsika Izy. Ary ny takalon’izany, amin’izao fotoana izao isika dia afaka manana ny hatsaran-toetra sy fahamarinan'i Kristy napetraka eo amintsika rehefa napetraka taminy ny fahotantsika. Fifanakalozana lehibe izany. Afaka ambara fa marina eo anatrehan'Andriamanitra isika! Nanolotra antsika, ao amin'i Jesosy, olona iray izay afaka mandoa ny trosa izay tokony naloantsika Aminy Andriamanitra.
Ny olona izay mahay manararaotra izany fifanakalozana izany, tamin’ny fametrahany ny finoany an’I Jesosy dia tonga Kristiana ary maniomboka miseho eo amin’ny fiainany izay zavatra nataon’Andriamanitra taminy. Saingy amin’izay fotoana izay dia miala amin’izay lalana nokasaintsika ny tantara.
Nanana namana, mpiara-miasa aminy izay nananany trosa denaria 100 ilay mpanompo. Ny denaria 100 dia mitovy aminà karama 100 andro hiasana. Vola mifanaraka amin’ilay asa fa tsy tena betsaka. Na izany aza dia tsy afaka nandoa ilay trosa ilay ranamana. Manantena isika fa hamela ny trosan’ilay mpiara-miasa aminy ilay mpanompo. Manantena isika fa hanana fangorahana ilay mpiara-miasa aminy ilay mpanompo. Miandry isika ny hananan’ilay mpanompo faharetana amin’ilay mpiiara-miasa aminy tahaka ny nananan’ilay Mpanjaka faharetana taminy. Inona anefa no hitantsika?... “ Dia nosamboriny izy ka notraohiny sady nataony hoe: Aloavy izay trosako aminao”. Tsy mba tsara fanahy tamin’ilay namany izy, tsy namela azy, ary tsy ela taorian’izay dia nampanao azy an-tranomaizina mandra-pandoany ny trosa.
Ny fandavantsika tsy hamela heloka dia mampiseho indrindra fa tsy azontsika ny hoe efa impiry no navela heloka moa isika. Raha tsy mamela ny heloky ny hafa aho dia satria tsy azoko hoe hoatry ny inona moa no halehiben’ny fahotana efa vitako teo anantrehan’Andriamanitra ary impiry navela tamin’izany aho. Ary io indrindra no tena lohahevitry ny fanoharantsika. Tokony hamela heloka isika satria mba efa navela ihany koa. Tsy manana zo hitazona alahelo, lolompo ary fahatezerana amin’ny rahalahintsika isika satria Andriamanitra tsy nitazona ny fahatezerany tamintsika.
Avy amin’ny fitiavana ny famelan-keloka dia ny fitiavan’Andriamanitra antsika ary avy eon y fitiavantsika ny hafa. Ary io no tsy azon’ilay mpanompo ka novidiany lafo ny tsy fahampian’ny fahatakarany.
Ny hoe mamela heloka dia midika fa tsy manana alahelo aminà-olona intsony isika. Ny hoe mamela heloka dia midika fa nilaozantsika ny hatezerantsika sy ny alahelontsika, amin’ny tsy fandavana fa nisy ny nampaharatra antsika. Indraindray ny ratra dia miandry fotoana hahasitranana. Fahadalàna ny filazana fa tsy misy dikany izany. Tena manana ny maha-izy azy izany. Ny famelan-keloka dia manaiky fa “nandratra ahy izy, saingy mamela azy aho na dia teo aza izany ratra izany”.
Ny mamela heloka dia tsy midika fa tsy misy vokany. Misy vokany ho an’izay nanafintohina antsika izany – ny famelantsika ny helony dia tsy mamotsotra azy tamin’ny maha-tompon’andraikitra azy tamin’izay nataony. Saingy mandà kosa ny hamaly faty azy isika.
Ny famelan-keloka dia midika fa feno fankasitrahana isika noho ny efa namelana antsika. Tsy mijery ny fahotantsika intsony Andriamanitra. Tsy manana trosa aminy intsony isika.
Mety no naratra noho ny fahotan’ny hafa isika ka tsy mahavira ny hamela azy. Raha ny marina dia efa elabe no nilona tao am-po izany saingy tsy namela ny hafa mihitsy isika. Izao no fotoana hangatahana fanampiana amin’Andriamanitra mba hamelana azy ireo. Mangataha aminy mba hanomezany antsika ny faniriana hamela heloka.
Angamba mbola mety ho nitana alahelo na fahatezerana amin’ny hafa ao am-pontsika isika, ankehitriny no fotoana hiaikentsika ny fahotantsika, ary mbola averiko indry, mangataha ny fanampian’Andriamanitra mba ho tena mpamela heloka tokoa isika.
Raha fantatsika fa nisy ny nampalahelo ny hafa tamintsika, ankehitriny, eo anatrehan’Andriamanitra, no fotoana hieritreretantsika ny hihavana. Andeha horaisintsika ny vaha-olana hametrahana amin’ny filaminana ireo zavatra ireo raha toa zava-dehibe amintsika izany.
Ao amin’ny Salamo 126 misy ireto teny ireto: “Izay mamafy am-pitomaniana dia hijinja am-pifaliana”. Tsy mora ny mamela heloka, tena lafo be, nefa raha mankato ny tenin’Andriamanitra isika ka mamela izay nanao meloka tamintsika dia hotahiana isika.
Farany, tokony ho lazaina fa na dia mamela heloka aza isika dia mila ny fahasoavan’Andriamanitra. Fanapahan-kevitra raisina ny famelana heloka kanefa tsy mandray izany irery isika. Ilay efa namela antsika dia afaka manampy antsika koa hamela ny hafa, eny na dia mamitaka antsika aza ny fihetseham-po ka te-hijanona ho maratra na tafintohina ao amin’izay misy antsika isika. Tsy ampahafirin’ny namelan’Andriamanitra antsika ny mba tokony hamelantsika koa ny namantsika na ny hafa. Raha trosam-pahotana tsy ho voaloantsika mandrakizay no navelan’Andriamanitra maimaimpoana tamintsika, ary raha zavatra kely tsy toy inona kosa anefa ny fahadisoana vitan’ny namantsika tamintsika ka nangatahiny famelana tamintsika, dia tsy hamelantsika azy ve isika?
Mieritrereta ry Havana, fa tsy atao tsianjery fotsiny ny hoe: “mamelà ny helokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay”. Amena!
Matthieu 18:21-35 - Combien de fois devrai-je pardonner à mon frère?
Revenons aux textes ! Nous commençons avec la question de Pierre "Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi?" La question de Pierre nous donne la suite de l'enseignement de Jésus sur comment résoudre les conflits entre frères.
Plongeons alors dans l'histoire... Le Roi veut demander des comptes à ses serviteurs. Ses serviteurs ont des dettes et le Roi exige simplement qu'ils les règlent. Voilà le mis en scène simple de la parabole de Jésus.
Quelqu'un qui profite de cet échange en plaçant sa foi en Jésus devient un chrétien et sa vie commence à refléter ce qui a été fait pour lui par Dieu. Mais c'est à ce point-là que l'histoire s'écarte du chemin auquel nous aurions pu nous attendre.
Il se peut que nous soyons tellement blessés par le péché d'un autre que nous nous sentons incapables de le pardonner. En fait, depuis longtemps l'affaire train dans notre cœur mais nous n'avons jamais pardonné l'autre. C'est maintenant le moment de demander l'aide de Dieu pour vraiment leur pardonner. Demandons-lui qu'il nous donne même le désir de vouloir pardonner.
Finalement, il faut dire que même pour pardonner nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pardonner est une décision à prendre mais nous ne la prenons pas tout seul. Celui qui nous a pardonné est aussi capable de nous aider à pardonner aux autres, même quand les sentiments nous trompent et que nous voulons rester dans notre petit coin, blessés. Si Dieu nous a pardonné gratuitement une dette de péché dont nous n’arriverons jamais à payer, ne devrions-nous pas pardonner nos collègues qui ont commis envers nous une petite infraction et par la suite nous à demander pardon?
Chers amis, je vous invite à réfléchir. Ne faites pas une routine la prière : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Amen
Prédication dimanche 17 septembre 2017